Sheeko Xasaasi Ah: Kooxda Chelsea Oo Bixinaysa Lacagta Ay Kooxda Juventus Kula Wareegtay Cristiano Ronaldo & Qaabka Ay U Bixinayso Oo Haatanba La Ogaaday – Kooxda.com
Sheeko Xasaasi Ah: Kooxda Chelsea Oo Bixinaysa Lacagta Ay Kooxda Juventus Kula Wareegtay Cristiano Ronaldo & Qaabka Ay U Bixinayso Oo Haatanba La Ogaaday
Kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay bixinayso lacagta ay kooxda Juventus ku iibsatay xiddigii hore ee kooxda Real Madrid oo shalay si Rasmi ah u noqday xiddig Juventus ah iyada oo haatan heshiiska ka dhiman tahay in uu xiddigu tijaabada caafimaadka u maro kooxda laguna dhawaaqo dhamaystirka heshiiska.
Waxa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ay kooxda Juventus lacagta ay ku iibsatay cristiano Ronaldo ku bixinayso lacagta ay ka hesho iibka xiddigaha Gonzalo Higuain & Daniele Rugani kuwaas oo ay chelsea ku doonayso lacag dhan 100 milyan oo euro ah.
Kooxda Juventus ayaa halyeeyga Real Madrid ku dhamaystirtay lacag dhan 100 milyan oo euro iyo 12 milyan oo Guno ah.
ilo wareedyo badan ayaa sheegaya in ay kooxda Juventus lacagtaas uga mahad celinayso kooxda chelsea oo ugu dambayn tababare u magacaabi doonta tababarihii hore ee kooxda Napoli ee Maurizio Sarri.
Tababaraha ayaa xiriir fiican la leh weeraryahankii hore ee kooxda Napoli ee Higuain kaas oo uu haatan booskiisa kooxdu khatar ku jiro kadib imaanshaha CR7.
Juventus ayaa doonaysa in ay weeraryahanka 60 Milyan uga iibiso kooxda chelsea si uu ula midoobo tababarihiisii hore halka ay sidoo kale Juventus Blues ka iibin doonto xiddiga Rugani oo horay tababaraha ugala soo shaeeyay Empoli.
Blues ayaa Rugani diyaar ula in ay ku iibsato lacag dhan 40 Milyan oo euro taas oo faa,iido weyn u ah kooxda Juventus marka loo eego in uu xiddigu lacag yar ugu soo biiray kooxda.